Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Ku soo noqoshada TUI ee Jamaica waxay noqon doontaa Isbadal Ciyaar Weyn
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
TUI waxay ku noqotaa Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu rumeysan yahay in soo laabashada qorshaysan ee TUI, oo ah shirkadda dalxiiska ee ugu weyn adduunka, ay ku noqon doonto Jamaica ay noqon doonto mid wax ka beddeli doonta waaxda dalxiiska oo hore u socota.
TUI ayaa la filayaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii jasiiradda Jamaica maalmo gudahood.
Tani waxay meesha ka saareysaa hubin la’aantii Jamaica kala kulantay suuqa UK, oo ka mid ah suuqyada ugu weyn ee ay ka helaan dadka safarka ah.
Shirkaddu waxay toddobaadkii keeni doontaa ilaa lix duulimaad, iyadoo siin doonta 1,800 illaa 2,000 oo kursi. Sanadkii 2019 TUI waxay qaadday 11.8 milyan oo rakaab diyaaradeed oo caalami ah.
Ku dhawaaqista soo noqoshada TUI waxay daba socotaa Go'aanka Dawladda UK ee ah in la qaado la -talinteeda ka soo horjeeda dhammaan safarka aan muhiimka ahayn ee Jamaica.
TUI ayaa la filayaa inay dib u bilowdo duulimaadyadii jasiiradda maalmo gudahood, ka dib markii ay joojisay bishii Ogosto sababtuna tahay talada Dowladda UK ee dadka deggan oo ka dhan ah safarka aan daruuriga ahayn ee jasiiradda sababtuna tahay hanjabaadda COVID-19, oo dhabar jab weyn ku noqotay dalxiiska.
Wasiir Bartlett wuxuu ku tilmaamay go'aanka TUI ee dib u bilaabista duulimaadyadii Jamaica "war soo dhawayn u leh warshadeena dalxiiska oo dib uga soo kabanaya burburkii adduunka ee uu sababay masiibada COVID-19." Wuxuu yiri, "Tani waxay meesha ka saartay hubanti la’aantii naga soo food saartay suuqa UK, oo ka mid ah suuqyada isha ugu weyn ee dadka safarka ah."
Wasiir Bartlett wuxuu muujiyey in “soo noqoshada TUI ay noqon doonto mid wax ka beddeleysa ciyaarta maadaama ay kicineyso qulqulka joogtada ah ee booqdayaasha UK oo ay ku tiirsan yihiin hanti badan oo maxalli ah iyo la -hawlgalayaasha dalxiiska. Markaa, saamaynta dhaqaale ayaa muhiim u noqon doonta oo kaliya dalxiiska laakiin sidoo kale dhaqaalaha ballaaran. ”
Wuxuu intaas ku daray “Duulimaadyada TUI waxay dib u bilaaban doonaan horaanta usbuuca soo socda iyadoo shirkaddu ay toddobaadkiiba keeni doonto ilaa lix duulimaad, oo siinaysa 1,800 illaa 2,000 oo kursi. Waxaan fiirineynaa ilaa 10,000 habeen oo qol oo huteelada ah oo si weyn loogu kala guuray hoy iyo qeybaha kale, gaar ahaan soo jiidashada iyo gaadiidka, taas oo macnaheedu yahay shaqaaleysiinta shaqaale badan iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee qoysaskooda. ”
Wasiir Bartlett wuxuu yiri: “Iyadoo TUI ay hadda ku soo noqotay jadwalka, Dalxiiska Jamaica soo kabsashadu si fiican bay ugu socotaa dib u hanashada dhulkii lumay waxayna nagu sii dhowdahay inaan ku laabanno tirooyinka diiwaangelinta kahor COVID. ”
Sanadkii 2019 TUI waxay qaadday 11.8 milyan oo rakaab diyaaradeed oo caalami ah. Waa kooxda dalxiiska ee hoggaamineysa adduunka. Baahiyaha ballaaran ee lagu soo ururiyey dalladda Kooxda waxay ka kooban tahay hawlwadeenno dalxiis oo xoog leh, qaar ka mid ah 1,600 wakaaladaha socdaalka ah iyo horjoogayaal internet -ka hogaamiya, shan diyaaradood oo leh ku dhawaad ​​150 diyaaradood, ku dhawaad ​​400 huteel, ku dhawaad ​​15 maraakiibta safarka ah iyo wakaalado badan oo imanaya dhammaan meelaha fasaxa waaweyn ee adduunka oo dhan . Wuxuu daboolayaa silsiladda qiimaha dalxiiska oo dhan hal saqaf.